🥇 aza ajụjụ nke onye ọrụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 724
Video nke ajụjụ nke onye ọrụ arịrịọ
Dezie ajụjụ maka arịrịọ onye ọrụ
Accountgụ ajụjụ nke arịrịọ ndị ọrụ bụ ihe ngosi nke ọrụ ndị ahịa na-enye ohere nyochaa ịdị irè nke ngalaba ahịa. Akpaaka na-enyere aka na nyocha ndị ọrụ. Imirikiti anyị maara nke ọma iji email ma ọ bụ Excel na ndị ibe ya dị ka usoro nyocha. N'ezie, ịkọwapụta data nwere ike ịdepụta nke ọma ma hazie ya bụ ezigbo usoro iji dozie nsogbu nsogbu nnabata. Agbanyeghị, a bịa na ịkwado, ntinye akwụkwọ, na njikwa arịrịọ, email na Excel abụghị ngwaọrụ kachasị mma. Emechakwa, dịka ọmụmaatụ, ha anaghị ekwe ka izipu ozi, gụnyere site na SMS. Nchịkọta ajụjụ maka ndị ọrụ mmemme, n'ụzọ dị iche na ngwa ọrụ ntanetị kacha dị mfe, na-enye ohere itinye nhọrọ dị iche iche. Ọbụghị naanị na ịdebe ndekọ nke arịrịọ onye ọrụ kamakwa jigide usoro nke ịkwadebe onyinye azụmaahịa, dekọọ eziokwu nke azụmahịa, nye ndị ahịa nkwado ozi, ma nyere aka na ọrụ post-service. Mmemme ngwa ndị ọrụ na-aza ajụjụ site na ụlọ ọrụ sistemụ USU Software bụ ihe dị mfe ma ghọta onye ọrụ. Na mmepe ahụ, ịnwere ike ịdebanye aha ngwa ngwa n'enweghị oge ịnọ na ha, n'ihi na a na-edebanye aha arịrịọ na akpaghị aka. Enwere ike iziga ha maka ndebanye aha na akpaghị aka site na e-mail, ndị ozi ozigbo, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, dabere na ijikọ na ịntanetị. Banyere dejupụta akwụkwọ, enwere ike rụọ ya na ọnọdụ akpaka, dịka ọmụmaatụ, jupụta nkọwa na akpaghị aka. Na mmemme sọftụwia USU, ị ga-ahụ ndekọ nke arịrịọ sitere n'aka onye ọrụ, ihe nzacha dị iche iche dị na ya nke mere n'oge ọ bụla, ị nwere ike ịchọta data ịchọrọ, mgbe, dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ na-echere nzaghachi nye ya arịrịọ. Ndị ahịa gị ga-enwe obi ụtọ na ọrụ ahụ. Ihe ndekọ ahụ nwere kaadị arịrịọ, nke nwere ozi gbasara onye ọrụ na arịrịọ. Kaadi arịrịọ ahụ dịkwa mfe ma kwụ ọtọ. Njikwa ajụjụ dị ezigbo mkpa maka njikwa tiketi. Automation USU-Soft dịkwa njikere inyere gị aka na nke a, ọ na - enyere gị aka ịghara ịhapụ oge imechi, n'oge kwesịrị ya ọ ga - agwa gị gbasara mmecha ọrụ ka ọ ghara ịgafe. N'ụzọ dị otú a ị ga-enwe ike ịchekwa ọdịdị gị dị mma na ndị ahịa gị ga-agbakwunye. Mmemme USU Software nwere ike ime ka ọrụ nke ndị ọrụ dị mfe ma adaba, a na-emezi ngwa ahụ oge niile, na-ejikọ teknụzụ kachasị ọhụrụ, ma mepụtara n'otu n'otu maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Site na ikpo okwu, ị nwere ike ịhazi ma akwụkwọ mpempe akwụkwọ na nke mpụga site na ndị ahịa, nke a na-eme ka ọ dị mfe site na njikọta na saịtị ahụ. Data na-aga ngwa ngwa, ma rụọ ọrụ ngwa ngwa, ọnụ ọgụgụ echekwara, nke nwere ike ịdị mfe maka nyochaa ịdị irè nke ndị ọrụ na nzukọ n'ozuzu ya. USU-Soft nwere uru ndị ọzọ doro anya maka mmemme ahụ, ọ ga-ekwe omume ịme ndekọ zuru oke nke ego, azụmaahịa, ndị ọrụ, ọrụ njikwa, yana ịme nyocha miri emi site na akụkọ ozi. Site na ihe enyemaka ahụ, ị nwere ike ịrụ ọrụ na akụrụngwa dị iche iche, mmemme, ndị ozi na ụdị ama ndị ọzọ. Onye ahịa ọ bụla dị anyị mkpa, ịnwere ike ịnwale mmemme ahụ site na nbudata ụdị nnwale nke USU Software. Ọ bụla ọrụ na akwụkwọ mfe, irè, na nke elu mma. Jikwaa nzukọ gị nke ọma site na iji ikpo okwu site na USU Software.
USU Software aza ajụjụ usoro na-eme ka usoro nke aza ajụjụ maka onye ọrụ na-arịọ na-adị mfe na oru oma. Site n'enyemaka nke USU-Soft, ị nwere ike ijere ndị ahịa ozi n'ụzọ ziri ezi ma nye ha nkwado ozi. Iji USU Software, ị nwere ike rụọ ọrụ nke ọma jikwaa azụmahịa nkebi ma nye nkwado onye ọrụ.
Atụmatụ ndekọ ego niile, usoro nyocha maka usoro ọ bụla nwere ike banye na sistemụ ego. Usoro mmemme ahụ dị mfe iji ma jikọta ya na teknụzụ ọhụụ. Usoro ihe omume ahụ na-abanye na data mbụ gbasara ndị ahịa gị ma ọ bụ arịrịọ gị, gbasara nzukọ, enwere ike ịme nke a site na ịbubata data ma ọ bụ jiri aka tinye data. Maka onye ọrụ ọ bụla, ị nwere ike itinye ego nke ọrụ ezubere, na njedebe, denye aha omume ịmepụtara.
Ihe omume a na oru nile di iche iche. Ekele maka usoro nyocha, ị nwere ike ịchekwa ngwaahịa zuru ezu na nke zuru ezu nke ebuka. Enwere ike ịhazi ngwaahịa akpaghị aka ka nkwekọrịta, ụdị, na akwụkwọ ndị ọzọ wee jupụta na akpaghị aka.
Njikwa ego na mmefu nke ụlọ ọrụ ahụ dị. Akụrụngwa ahụ gosipụtara ọnụ ọgụgụ nke arịrịọ na arịrịọ zuru ezu, n'oge ọ bụla ị nwere ike soro akụkọ ihe mere eme nke mmekọrịta gị na onye ọrụ ọ bụla. Nlekota nke imekọ ihe ọnụ na ndị na-eweta ngwaahịa dị. N'ime sọftụwia ahụ, ị nwere ike idobe yana njikwa njikwa ego zuru ezu. Ikpo okwu jikọtara na telephony. Ekele maka ngwanro ahụ, ị nwere ike ijikwa alaka na nkewa nhazi. Iji software, ị nwere ike ịtọlite nyocha nke ogo nke ọrụ enyere. Enwere ike ịhazi usoro ihe omume iji tinye ọnụ na ọnụego ịkwụ ụgwọ. Ọ bụla ọrụ hụrụ ndị mara mma imewe na mfe ọrụ nke software. Integration na telegram bot kwere omume. USU-Soft na-agbanwe mgbe niile maka ijikọ na teknụzụ ọhụụ. USU-Soft bụ ngwa ọrụ nke oge a nwere ọtụtụ ọrụ sọftụwia. Na ahịa ngwa dị ugbu a, enwere ọtụtụ mmemme maka ịza ajụjụ onye ọrụ, na-atụle ọnụọgụ ego na freebies, mana imirikiti n'ime ha na-agbada na mpaghara isiokwu dị oke mkpa ma ghara itinye aka na kọntaktị nke otu nzukọ. Fọdụ n'ime ha na-atụ uche arụmọrụ achọrọ, ụfọdụ nwere ọrụ 'mgbakwunye' nke ọ ka mma na-agaghị akwụ ụgwọ, ihe a niile chọrọ nhazi nke usoro maka mkpa ụlọ ọrụ ahụ. Lee ya - Sistemụ sọftụwia USU.